Soomaaliya iyo xirista Dhadhaab - BBC Somali
Soomaaliya iyo xirista Dhadhaab
Go'aankani si xun ayuu u saameyn doonaa inta badan qaxootiga Soomaalida ee ku jira labada xero ee Dhadhaab iyo Kakuma , waxaana uu uga sii darayaa khatarta argagixisanimada, marka la eego xaaladda jilicsan ee ka dhalan karta go'aankan degdegga ah iyo tallaabooyinka la sheegay in lagu dhaqaaqayo, ayuu sheegay warka ka soo baxay dowaldda Soomaaliya.
Wasaaradda arrimaha dibaddu waxay doonaysaa inay marka hore dadweynaha iyo dowladda Kenya uga mahadceliso marti gelinta ay u fidiyeen qaxootiga Soomaalida muddo 20 sano ka badan iyo sidoo kale sidii ay ugu lug lahayd dhexdhexaadinta iyo nabad u raadinta colaadda Soomaaliya, ayaa la yiri.
Maanta, waxaa jira hab saddex geesood ah oo ay isku raaceen Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR oo wada jir ay uga shaqeynayaan in si nabad ah oo sharaf leh qaxootiga loogu celiyo dalkoodii hooyo. ka tegidda heshiiskaas waxay noqonaysaa in dowladda Kenya ay sharci ahaan iyo damiir ahaanba dhinaceeda ka fulin weyday, ayuu sheegay warku.
Soomaaliya waxay kala shaqeynaysaa Kenya ka hortagga argagixisada caalamiga ah. Hase ahaatee, guul arrintaas wada jir looga gaaro waxay ku xiran tahay wadaagidda sirdoonka iyo dhaqaalaha iyo sidoo kale wada shaqeynta iyo is-aaminaadda. ayaa warku sheegay.
Qaxootiga Soomaalida oo la soo eryo waqti ay Soomaaliya horumar caalamku ammaanay ka sameynayso xasilloonida iyo dhismaha hay'adaha dowliga ah waxaa keliya oo ay sii kordhinaysaa nabadgelyo la'aan ka dhacda gobolka.